उपत्यकाको सुरक्षामा ग,म्भीर प्रश्न : लकडाउनको बेला कसरी भित्रिए कोईलाका ट्रक ?…हेर्नुहोस!::Point Nepal
उपत्यकाको सुरक्षामा ग,म्भीर प्रश्न : लकडाउनको बेला कसरी भित्रिए कोईलाका ट्रक ?…हेर्नुहोस!
सरकारले लकडाउन गरेको समय अत्यावश्यक वस्तुमात्र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, सवारीको अगाडी खाद्यन्न र आल्मुनियम सल्फेट ढुवानीको पत्र टाँसेका ट्रक ईटा भट्टामा प्रयोग हुने कोइला बोकेर भक्तपुर आइपुेका छन् । ईटा भट्टामा प्रयोग हुने कोइला बोकेका एक दर्जन भन्दा धेरै ट्रक भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा पुगेपछि स्थानीयवासीहरु त्र,सित भएका छन् ।
रक्षक नै भक्षक : डिआईजीको सीआरभी कमान्डर एसपी रेवती ढकालको टोली नै लु,टपाटमा सं,लग्न
महानगरिय प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार ती ट्रकहरु पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जबाट हेटौडा हुँदै भक्तपुर आइपुगेका हुन् । केहीलाई प्रहरीले भक्तपुर प्रवेश गर्ने ना,कामा रो,केको छ । प्रहरीको दर्जनौं सुरक्षा घेरा पार गर्दै खा,द्यान्न र आल्मुनियम सल्फेट ढुवानीको पत्र टाँसेका ट्रक भक्तपुर पुग्नु रहस्यमय देखिन्छ । शनिबार बिहान चाँगुनारायण नगरपालिकाको ८ र ९ वडामा कोइला बोकेका ट्रक आएपछि स्थानीयहरुले विरोध गरेका छन् ।
स्थानीयको वि,रोधपछि चाँगुनारायण नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र सुडाल पुगेका थिए । तर यति भैसक्दा पनि उपत्यकाको सुरक्षाको कमाण्ड सम्हाल्ने डिआईजी विश्वराज पोखरेल बेखबर थिए । दिनरात नभनी नागरिकको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीबाट भएको यो ग,ल्ति अक्षम्य भएको सुरक्षाविदहरुले बताए । सदैब चनाखो देखिने डिआईजी पोखरेलले यो पटक पनि आफ्नै टिमबाट उचित समन्वय नहुँदा ब्याकफायर खाएका छन् ।
विश्वभर को,रोना भा,ईरसको जो,खिम बढ्दै गएको समयमा ईटा व्यवसायीले भने खाद्यान्न र औषधीजन्य उद्योगलाई अत्यावश्यक भन्दै कोइला ल्याएका छन् । उनीहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पुरा गरेको देखिदैंन । यसबारेमा प्रतिक्रिया लिँदा नगरप्रमुख मिश्रले माथिल्लो तहदेखिको सेटिङ्गमा वीरगञ्बाट कोइला बोकेका ट्रक चाँगुनारायण आएका बताए ।
मिश्रले भनेको ‘माथिल्लो तह’ जनताको स्वास्थ्यप्रति यति बिघ्न ला,परवाह कसरी बन्न सक्छ ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल को,रोना सं,क्रमणको दोस्रो चरण भनेकाले त्यसतर्फ सम्बन्धीत सबैले सचेतना देखाउनु पर्ने भएपनि त्यो पुरा भएको देखिदैन् । भारतबाट आएका आफ्ना नागरिकलाई सीमामा अलपत्र छाडेर सरकारले सिमित ब्यापारीको स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति गरेका यस्ता सस्ता नि,र्णय भबिष्यमा निकै महँगो पर्न सक्छ । काठमाडौँमा उपभोग्य वस्तु ग्यास लिन गएका एक नागरिकलाई उठबस गराएको प्रहरी प्रशासनले कतै शक्तिका सामु घुंडा टेकेको त हैन ?
अव्यवसायिक गि,रोहको दु,ष्चक्रमा व्यवसायिक प्रहरी डीआईजी पोखरेल